Apple Hires Doug Bowman, a Virtual Adị nchọpụta | Esi m mac
Apple gores Doug Bowman, onye na-eme nchọpụta n'eziokwu
Oge ego na-ekpughe ọhụụ ọhụrụ Apple nke ọkachamara na ngalaba fọrọ nke nta ka ọ ghara ịchọpụta maka ụlọ ọrụ ahụ, anyị na-ekwu maka eziokwu dị adị, teknụzụ nke etolitela kemgbe ọtụtụ afọ ma ruo ugbu a enwebeghị mmetụta dị mkpa ịbanye dịka Egwuregwu elektrọn nke ndị ọrụ mana ya na ya ọdịdị nke Oculus Rift na nkwado sitere na ngwanrọ nke ndị mmepe, ugbu a nwere ike ịbụ oge ịmalite iche echiche banyere ọdịnihu dị mkpirikpi na ngwaahịa nwere ike ịsọ mpi na ihe na-abịa site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Maka nke a, Doug Bowman, prọfesọ injinia sọftụwia na Virginia Polytechnic Institute na Mahadum Ọchịchị, ka Apple họọrọ ịbụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ na mmepe nke teknụzụ n'ime ụlọ ọrụ.
Kpọmkwem, Doug Bowman bụ onye isi nke ngalaba Mmekọrịta Mmadụ na Kọmputa ma lekwasị anya na "atụmatụ atụmatụ ndị ahịa atọ na uru na ọnọdụ dị iche iche." Bowman enwetawo onyinye dị iche iche site na ihu atọ ndị ahịa mepere emepe na ihe ndị ọzọ pụrụ iche rụpụtara n'ime VR, si otú a nweta onye ndụmọdụ maka Disney Imagineering.
Cheta na ọ dịbeghị anya Apple nwetara ụlọ ọrụ Emotient nke na-arụ ọrụ na mmata nke mmetụta uche dabere na ọdịdị ihu n'ime oghere enyere, nke itinye ngwa nke eziokwu ga-eme ọtụtụ echiche. N'ebe a, anyị amalitelarị iche maka ọdịnihu nke teknụzụ ndị a na ngwaahịa nke nwere ike ịbụ ihe ọhụrụ n'ime oke asọmpi asọmpi.
E wezụga ụlọ ọrụ a zụtara onye ọzọ akpọburu FaceShift jiri teknụzụ animation mara mma karịa ka ọ kara nke sitere na ngosipụta nke ndị na-eme ihe nkiri, nke ebufere ozugbo na avatar ma ọ bụ agwa emere na 3D. Ihe dika ichogharia mmeghari anya.
Echere m na n'oge na-adịghị anya mgbe anyị ga-ahụ ụfọdụ ọkwa Apple banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple gores Doug Bowman, onye na-eme nchọpụta n'eziokwu
Ọhụrụ Apple TV ad: "Ọdịnihu nke TV bụ ngwa"
Ihe omuma ohuru nke Apple, oge a maka Apple Watch